[81% OFF] FTD.ca ကူပွန်များနှင့် ဘောက်ချာကုဒ်များ
မည်သည့် Ftd.com အမိန့်ကိုမဆို 20% အတွက်ကူပွန် FTD ကနေဒါသည်သင်၏နှင်းဆီပန်းများ၊ ပန်းစည်းများ (သို့) အပင်များအားနောက်ထပ်ပို့ရန် FTD ကိုယုံကြည်ပါ။ ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းပန်းဝန်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနှင့်သင်၏ပန်းများသည်အမြဲလတ်ဆတ်ပြီးလှပနေစေရန်ကုမ္ပဏီသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောလွတ်လပ်သောပန်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
၅၀% ချွေတာသုံးစွဲနိုင်သောနေရာကိုရယူပါ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁ အတွက် FTD ကနေဒါကူပွန်များနှင့်ပရိုမိုကုဒ်များနှင့်အတူသိမ်းဆည်းပါ။ ယနေ့ထိပ်တန်း FTD ကနေဒါကူပွန်များနှင့်ပရိုမိုကုဒ်များလျှော့စျေး ယနေ့စျေးဝယ်ပါ။
$ 10 Off $ 49.99 + Ftd.com မှာယူမှုကိုခံစားပါ အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက် ftd.ca တွင်သင်၏ပန်းနှင့်လက်ဆောင်များမှာယူမှုတိုင်းအတွက် ၂၀% လျှော့ပါ။ ကမ်းလှမ်းမှုမကုန်မီစျေး ၀ ယ်ပါ။ 20 ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်ရယူပါ။ အသေးစိတ်။ အသေးစိတ်။ ကမ်းလှမ်းချက်ရယူပါ။ သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်: 4/5/28 တင်ပြသည် - menash အားဖြင့် ၁၃.၃.၂၁ တွင်သက်တမ်းကုန်မည်။
၂၅% ခန့်ထားရန်ရွေးချယ်ထားသော Valentine Day ပန်းများ Carnation စီစဉ်မှုများ - FTD.ca ၉၉.၀၀ ဒေါ်လာမှစတင်သည်။ The Beautiful Spirit ™ Arrangement သည်ပေါ့ပါး။ ချစ်စရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းများ၊ အာရှနှင်းဆီပန်းများနှင့်မျက်နှာနီနီများ အမျိုးအစား: ကူပွန်
သင်၏ဝယ်ယူမှု Sitewide မှ ၁၀% ပိုလျှံသည် Ftd.Ca ကူပွန်များ၊ ပရိုမိုကုဒ်များနှင့်လျှော့စျေးများ - သြဂုတ်လ ၂၀၂၁ ။ ၅၅% လျှော့ပါ မရ။ Ftd.Ca. မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်ကမ်းလှမ်း
Ftd.com တွင်ပန်း၊ အပင်နှင့်လက်ဆောင်များကို ၂၅% လျှော့ချပါ FTD ကူပွန်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ-ရံဖန်ရံခါ FTD.com သည်အချို့အားလပ်ရက်များအတွက်တိကျသောကူပွန်ကုဒ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤအရာများကို၎င်းတို့၏ပင်မစာမျက်နှာ (သို့) Coupons.com တွင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာများမှာအဖေများနေ့/အမေများနေ့၊ အောက်မေ့ရာပွဲနေ့၊ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက FTD သည်ရောင်းချခြင်းမှတဆင့်စျေးလျှော့ပေးသည်။ ကူပွန်ကုဒ်များမလိုအပ်ပါ။
Sitewide off 20% ။ သဘောတူညီချက်ကိုသက်သာစေရန် FTD လျှော့စျေးကုဒ်တစ်ခုအတွက် CNN ကူပွန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်ချပါ၊ သင်သွားလိုသည်။ USAA အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသက်သာလျှင်သင်သည်စစ်မှုထမ်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သို့မဟုတ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်ဆက်နွယ်ပါက USAA သို့ ၀ င်ပါ၊
နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုကို FTD တွင်ဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာထပ်မံယူပါ ယနေ့ထိပ်တန်း FTD ပန်းများကူပွန်ကုဒ်။ ။ ၂၀၂၁ အတွက် FTD ပန်းကူပွန်ကုဒ်များနှင့်ကူပွန် ၁၁ ခုရယူပါ။
FTD တွင်သင်၏နောက်ထပ်အမှာစာကိုဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာဖြင့်ကူပွန် Customer Support လိုအပ်ပါသလား။ ငါတို့ကမင်းအတွက် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ် ၇ ရက်။ အမိန့်လမ်းကြောင်း 24.SEND.FTD (7) သို့ဆက်သွယ်ပါ
$5သင့်ရဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းကို FTD မှာ Off မင်းသူတို့ကိုဘယ်လောက်လေးစားတယ်ဆိုတာမင်းကိုပြဖို့ကူညီဖို့ပုံနှိပ်အချစ်ကူပွန် ၃၀ ပါတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုငါတို့ဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူတို့အကြိုက်ဆုံးအချိုပွဲတွေနဲ့သူတို့ကိုဖြုန်းတီးပစ်ပါ။ ကျောကိုပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်နေ့တာရှည်ပြီးနောက်သူတို့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ကူညီပါ။ မျှော်လင့်မထားတဲ့စွန့်စားခန်းတစ်ခုကိုသွားရင်းအချိန်ဖြုန်းပါ။ မင်းရဲ့စာအုပ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းမှာဖြည့်လို့ရတဲ့ကွက်လပ်ကူပွန်တွေထည့်ပေးခဲ့တယ်။
FTD တွင်သင်၏နောက်ထပ်အမှာစာကို $5ချွတ်ပါ ရရှိနိုင်သော Ftd CA 30 OFF ကူပွန်စုစုပေါင်းကမ်းလှမ်းချက် ၅ ခု၊ ကူပွန်ကုဒ် ၄: အပေးအယူ ၁: ftd.ca. Ftd -54 OFF မင်းဈေးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုမှတ်မိလား။ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ သည် Ftd - 1 ကို ၃၀ လျှော့စျေးအတွက်ကူပွန်ကုဒ်တစ်ခုပေးမည့်လဖြစ်သည်။ Ftd - ၂၆၀ ရှိစျေးသည်များသည်ကူပွန်ကိုသုံးခွင့်ရလိမ့်မည်။ အခြားအရာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ...